I-gum yegazi, umkhuhlane, i-hypersensitivity ye-koqweqwe lwawo ... Yonke ama-hormone asetshenziswe emzimbeni womama ozayo. Amazinyo anempilo namazinyo ngesikhathi sokukhulelwa kuyisimo esidingekayo sokuzinakekela.
Izinkinga ngomlomo womlomo manje udinga ukuqeda ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kodwa ungesabi! Konke kuzodlula. Okuthile ngosizo lomjoka wamazinyo oqeqeshiwe, okuthile okuhambisana nokuhambisana nemithetho ethile yokudla nokuhlanzeka, nokunye okunye. Emva kokuzalwa kwengane.
Oh, gingivitis, gingivitis ...
Ezinyangeni zokuqala zokulindela umntwana, omama abakhulelwe bavame ukuvuvukala kwamazinyo enempilo namazinyo ngesikhathi sokukhulelwa - gingivitis. I-Desna iyoma, ivuvuka, iphuma. Isizathu salolu shintsho lwe-hormonal (ukushintshashintsha kwezinga le-estrogen ne-progesterone), elingaphansi komzimba wesifazane okhulelwe. Qaphela ikakhulukazi uma unesifo esinomsoco. Iphendula ngokuzenzekelayo ezinhlobonhlobo ze-irritants, isibonelo, ukudla okunomsoco nokumnandi, ukucindezeleka. Kwenzeka, emgodini womlomo kukhona i-neoplasm - granuloma.
Leli yigama le-nodule encane ku-gum eqala ukuphuma lapho ixubha amazinyo. Ngokuvamile lokhu kwakhiwa kuyanyamalala ngaphandle kokulandela ngemuva kokuzalwa kweziqu. Uma i-granuloma ikuxosha ngokungathí sina (ivimbela ukuxubha amazinyo akho), qiniseka ukubuyela kudokotela omuhle. Awudingi ingozi eyengeziwe okwamanje. Ukuyeka ukuphuma noma ukuzola ubuhlungu, sebenzisa ukumnika izitshalo zokwelapha kuvunyelwe abesifazane abakhulelwe.
Lungisa i-decoction ye-10 amagremu we-chamomile noma isikhwama setiyi setiyi nalezi zimbali ezimangalisayo.
Ukumelela imizuzu engu-15, bese ukhula futhi upholile. Thatha lokhu ukuphuza kathathu ngosuku, futhi uwahlanza ngomlomo (okungenani umzuzu owodwa). Geza amazinyo akho kabili ngosuku, uhamba kusukela ku-gomamu kuze kube semkhawulweni we-dentition. Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwintambo - intambo ye-silk. Kungcono ukukhulula izikhala zamazinyo kusukela ku-plaque kusihlwa, ngaphambi kokuhlanza. Futhi nakuba intambo ehlanganisiwe ayinayo imiphumela efanayo nanjengoba abangenalutho, odokotela bacebisa ukuqala ngeyokuqala. Kulula ukufaka phakathi kwamazinyo, okusho ukuthi lokhu ngeke kubangele ubuhlungu futhi ngeke kulimaze i-gom.
Herpes - cha!
Umkhuhlane ezindebeni ezibangelwa igciwane le-herpes uchazwa ukukhubazeka kokuzivikela komzimba amazinyo anempilo namazinyo ngesikhathi sokukhulelwa. Kulesi simo kubalulekile ukuvela ochwepheshe. Ngokuqinisekile ngeke nje anikeze iseluleko sokuqeda ukuhlukumeza, kodwa futhi ulungise vithamini yakho eyinkimbinkimbi nokudla. Phela, udinga ukuqinisa imisebenzi yokuvikela yomzimba. Kodwa-ke, akuzona zonke izinto ezimbi kakhulu: ngenkathi ulinde ingane, ukwehla kwegciwane lengculazi kuyimvelo, ngakho-ke kungenzeka ukuthi i-herpes ngeke ithinte inkambo yokukhulelwa. Kunoma yikuphi, lolu daba kufanele luxoxwe nodokotela. Ngomkhuhlane ezindebeni, ama-phytotherapists bayelulekwa ukuba basebenzise amaqabunga ama-lemon amasha endaweni evulekile. Izakhamuzi zibonisa ukuthi kunezinto eziningi eziqukethe i-vitamin C. Nsuku zonke ekudleni kwakho kufanele kube nezinhlanu nemifino kulolu hlu: izithelo ze-citrus, ama-currants omnyama, ama-apula, ama-apricot omisiwe, amahlumela aseBrussels, i-parsley ... Imifino (ikakhulukazi amaqabunga, isibonelo, isaladi kanye nesipinashi), izithelo, okusanhlamvu okuphelele, amantongomane, inhlanzi, inyama enomzimba, yi-imikhiqizo izonikeza umzimba izakhi ezidingekayo ukulwa nokutheleleka ngegciwane. Qaphela: kwimenyu yakho kufanele kube khona ukudla okucebile nge-calcium (ngesikhathi sokukhulelwa, isidingo salo sanda kathathu). Kungenjalo amazinyo akho angase ahlupheke. Lokhu kufaka phakathi imikhiqizo yobisi, ushizi, i-cottage shizi. Kodwa-ke, iningi lazo zonke i-calcium, ngokusho kososayensi, litholakala emafutheni we-sesame angagciniwe. Elinye isipuni ngosuku lihlanganisa ngokuphelele isidingo nsuku zonke somama esizayo kulokhu. Ngendlela, ukumuncwa kwe-calcium kuthuthukisa i-magnesium ye-mineral-trace - ngaphandle kwayo noma kuphi. Ngakho-ke incike emanzini nasolwandle kale.
Ngokwezibalo, izifo ezingu-3% ze-intrauterine zithuthuka ngenxa yokuqeda amantombazane alindele. Lokhu kungagwenywa kalula: ukuvakashela udokotela wamazinyo hhayi kuphela ukwelashwa, kodwa futhi ngenhloso yokuvimbela.
Kuvela ukuthi ukuhlanzeka, ubumhlophe kanye nempilo yamazinyo akho akuxhomeke ekutheni unamathele, kodwa ukuthi uzihlanza kahle kangakanani. Khumbula ukuthi ngokushesha emva kwekhofi, itiye kanye nejusi, amazinyo akufanele ahlanzwe - ingozi enkulu yokulimaza i-koqweqwe lwawo. Emva kokuthatha lezi ziphuzo, okungenani ihora kufanele udlule ngaphambi kokuxubha amazinyo akho. Lokhu kuphathelene nenqubo yokuhlanzeka kusihlwa. Ekuseni, amazinyo kufanele ahlanzwe ngokushesha ngemva kokulala. Ukuhlanza ngalunye kufanele kuhlale okungenani ngomzuzu, kodwa kungabi ngaphezu kwezintathu. Izinyathelo ezifanele zesisindo, ngezindlela ezihlukile, zihlanza ngokuphelele i-plaque yonke. Ukubunjwa kwama-pastes anamuhla amazinyo nezinsana ezinempilo ngesikhathi sokukhulelwa akuyona into ebaluleke kakhulu, ngoba konke kukhiqizwa ngokwezwi lokugcina lemithi. Kodwa-ke, ucwaningo lubonisa ukuthi i-pasta ene-fluoride (i-fluoride compounds) iphumelela kakhulu kunabanye ukuvikela amazinyo kusuka ku-caries ecasulayo. Kodwa ukuphuma kwegum akusiphulukisi ukunamathiswa. Ngidinga udokotela onolwazi! I-pasta inga, mhlawumbe, ngezinga elithile igweme ukutholakala kwe-gingivitis ne-periodontitis. Ngokuqondene nama-elixirs amazinyo, akuboniswanga ngempela ukuthi ukusebenzisa kwabo kungavimbela noma kunciphise kakhulu ukwakheka kwe-plaque, i-tartar nokunye ukubonakala kwesikhathi. Ngokuphefumula bayaqabula. Umqondo we-toothbrush ofanayo uwukuthi: ngezingqimba ezingavamile zitholakalayo, ezine-concave ebusweni, obunzima obuphakathi. Ukushintsha i-toothbrush akufanele kube njalo, kunesikhathi esinezinyanga ezintathu. Ekupheleni kwalesi sikhathi, ngisho nekhwalithi yekhwalithi engcono kakhulu ihlehla futhi ayikwazi ukubhekana nemisebenzi yayo eqondile.
Azikho izinsuku ezifanele zokuvakashela udokotela wamazinyo mayelana ne-caries. Kudingekile ukufaka uphawu emgodini ngamunye! Amalungiselelo anamuhla we-anesthesia yamazinyo aphephile ku-fetus kunoma iyiphi i-trimester. Kodwa ukubola kwezinyo okungelapheki kuyingozi, ngoba kungabangela ukutheleleka. Ngakho vakashela udokotela ngesidingo sokuqala.
Ilayisha izinsuku ngezinsikazi ezikhulelwe
Impilo yowesifazane ngesikhathi sokukhulelwa
Ikhalenda lokukhulelwa: amasonto angu-39
Ukuvuthwa, ukukhulelwe, ukukhulelwa
Indlela umbala wezinwele oshintsha ngayo ukuziphatha
Kanjani ekhaya ukukhathalela imbali azalea?
Coenzyme Q10: isenzo, okuqukethwe kokudla, amalungiselelo
Amaflaya emfashini nama-sweaters ephelele, ekwindla-ebusika 2015- 2016, isithombe
I-downy yamaphilisi e-Downy
Ukunakekelwa komzimba okufanele ebusika
Amafutha abalulekile esikhumba
Imfashini iyingxenye ebalulekile yokuphila kwethu noma indlela yokuthola imali.
Sibelana ngemfihlo, indlela yokudala umuthi oqinile ngaphandle kwama-chips nemikhonyovu
Kusho ukuthini ukuthethelela?
Bubbles emqaleni: kuyini nokuthi kufanele silwe kanjani?
I-fork fillet ne-thyme